Semalt: छविहरू डाउनलोड गर्न सबै भन्दा भिन्न Chrome विस्तारहरू
भिडियो र फोटोहरू हाम्रो जीवनको अभिन्न हिस्सा हुन्। ठूलो संख्यामा व्यक्तिले फेसबुक, ट्विटर, र अन्य सामाजिक मिडिया साइटहरू आफ्ना साथीहरू र परिवारका सदस्यहरूसँग छविहरू साझा गर्न प्रयोग गर्छन्। कहिलेकाँही तिनीहरू आफ्नो हार्ड ड्राइवमा फोटोहरू डाउनलोड गर्न चाहन्छन्, तर यो साधारण उपकरणको साथ सम्भव छैन। जे होस्, तपाईले यी उत्कृष्ट क्रोम एक्सटेन्सनहरू प्रयोग गरी हेर्न चाहानुहुन्छ फोटोहरू डाउनलोड गर्न।
१. छवि डाउनलोडर
छवि डाउनलोडरको साथ, तपाईं सजिलैसँग कुनै पनि साइटबाट फोटोहरू ब्राउज वा डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाइँ सामाजिक मिडियाबाट बल्क छविहरू डाउनलोड गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने, यो क्रोम विस्तार तपाइँको लागि सहि छ। यो पनि तिनीहरूको चौड़ाई, उचाई र URL मा आधारित छविहरू फिल्टर गर्न सक्नुहुन्छ। यसका अतिरिक्त, छवि डाउनलोडरले REGEX ढाँचा समर्थन गर्दछ, र छविहरू गुणवत्तामा सम्झौता नगरी डाउनलोड गर्न सकिन्छ। यस कार्यक्रममा ठूलो संख्यामा बटनहरू छन् जुन तपाईंको कामलाई सजिलो बनाउँदछ। तपाईं यो विस्तारलाई कस्टमाइज गर्न, फिल्टर लुकाउन वा देखाउन सक्नुहुन्छ, र तपाईंको इनबक्समा सूचनाहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। जब तपाईं डाउनलोड बटन थिच्नुहुन्छ, सबै चयनित तस्बिरहरू हाम्रो हार्ड ड्राइभमा वा एक्स्टेन्सन भित्रको डाइरेक्टरीमा बचत हुनेछ।
२. फटकन ब्याच डाउनलोड छवि
फटकन ब्याच डाउनलोड छवि वेबमास्टरहरू र सामग्री क्यूरेटरहरूको लागि अर्को क्रोम विस्तार हो। तपाईं छविहरू फिल्टर गर्न र तपाईंको आवश्यकता अनुसार उनीहरूको रंगहरू परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। वैकल्पिक रूपमा, यस क्रोम एक्स्टेन्सनले तपाईं छविहरू तिनीहरूका मूल र inहरूमा डाउनलोड गर्न सजिलो बनाउँदछ। तपाईंले भर्खरै डाउनलोड गरेको सबै तस्वीरहरू छान्नुहोस् र डाउनलोड वा बचत बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। यो विस्तार लगभग सबै वेब ब्राउजरहरु र अपरेटिंग प्रणाली संग मिल्दो छ। यो एक निःशुल्क, खुला स्रोत विस्तार हो जुन कुनै विज्ञापन र ट्र्याकि al एल्गोरिदमसँग आउँदैन।
Gal. ग्यालेरिफाई - एक शक्तिशाली छवि डाउनलोडर
ग्यालरीफि सबैभन्दा उत्तम र सब भन्दा शक्तिशाली छवि स्क्र्यापर्स हो। यस क्रोम विस्तारको साथ, तपाईं ब्राउज गर्न र फोटोहरूको ठूलो संख्या डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र कुनै पनि वेबसाइट वा सामाजिक मिडिया साइटलाई लक्षित गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईले आफ्नो गुगल क्रोम ब्राउजरको दायाँ कुनामा रहेको ग्यालरीफाइ बटनमा क्लिक गर्नुपर्नेछ र एक पप-अप विन्डो तुरून्त देखा पर्नेछ। यस क्रोम विस्तारको सब भन्दा विशिष्ट सुविधाहरू मध्ये यो यो छ कि कुनै पनि साधारण वा गतिशील वेबसाइटबाट बल्क फोटो डाउनलोड गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ।
Pic. पिक Grabber
Pic Grabber अर्को उत्कृष्ट क्रोम एक्सटेन्सन हो जुन कुनै पनि वेबसाइटबाट छविहरू डाउनलोड गर्न मद्दत गर्दछ। यसले तपाइँलाई एक पटकमा धेरै वेब पृष्ठहरू लक्षित गर्न सक्षम गर्दछ र तपाइँको आवश्यकता अनुसार फोटोहरू डाउनलोड गर्न वा स्क्र्याप गर्न सजिलो बनाउँदछ। तपाईंले फोटोहरू निश्चित आकार (कम्तिमा २००px चौडा) भएको निश्चित गर्नुपर्दछ किनकि पिक Grabber ले २००px भन्दा कम छविहरू लिने छैन। यस क्रोम एक्स्टेन्सनको साथ तपाईं कुनै पनि गतिशील साइटको छविहरू र भिडियो फाइलहरू स्क्र्याप गर्न सक्नुहुनेछ। कुनै श doubt्का छैन, Pic Grabber ग्यालरीफाई र छवि डाउनलोडरको लागि एक राम्रो विकल्प हो र क्रोम स्टोरमा पहुँच गर्न सकिन्छ। Pic Grabber को नयाँ संस्करण Pic Grabber ०.०.०.२ हो जुन एक समान फोटो वा छविको बहु प्रतिलिपिहरू डाउनलोड गर्न केही फिक्सहरू समावेश गर्दछ।
यी सबै क्रोम विस्तारहरू तत्काल इन्टरनेटबाट डाउनलोड गर्न सकिन्छ र नि: शुल्क छन्।